गोपनीयता नीति | डाटा रिकभरी
Home → गोपनीयता नीति
LC प्रौद्योगिकी गोपनीयता नीति
डाटा रिकभरी सेवा:
हाम्रो डाटा रिकभरी प्रयोगशाला सबै ग्राहक डेटा संग सुरक्षित वातावरण मात्र उपयुक्त विशेषज्ञहरु संवेदनशील जानकारी ह्यान्डल सुनिश्चित गर्न निजी र नियन्त्रण प्रयोगशाला पहुँच राखिएको छ. हामीले नियमित रूपमा सरकार लागि वर्गीकृत डाटा रिकभर गर्न अनुबंधित छन्, कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट र निजी संगठनों. LC प्रौद्योगिकी वर्गीकृत कि सामाग्री आवश्यक गोपनीयता र सुरक्षा को स्तरमा accustomed छ. सबै बरामद कागजातहरू स्थायी पछि सखाप छन् 30 दिन.
उद्देश्य: LC प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रिय गोपनीयता नीति कथन हामी प्रयोगकर्ताहरूको सङ्कलन जानकारी गाइड लेखिएको थियो र हामी जानकारी कसरी प्रयोग. हामी महसुस यो तिनीहरूलाई हामीलाई आपूर्ति जानकारी एक शिक्षित र सहज निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं कुनै प्रश्न टिप्पणी वा चिन्ता खुसी छन् भने हामीलाई Service@LC-Tech.com मा थाहा.
डेमोग्राफिक र व्यक्तिगत जानकारी हामी अनुरोध
हामी कसरी सङ्कलन जानकारी प्रयोग
जो हामी संग जानकारी साझा
तथ्याङ्क ट्रयाकिङ्: LC प्रौद्योगिकी संचालित4साइटहरु हात, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com र www.PHOTORECOVERY.us सबै साइटहरु तथ्याङ्क ट्र्याक. हाम्रो साइटहरू जस्तै Google विश्लेषण र बिंग विश्लेषणात्मक रूपमा सेवा ट्रयाक विश्लेषण उपयोग.
यी सेवाहरू यस्तो हेरिएको पृष्ठ रूपमा हाम्रो लागि तथ्याङ्क उत्पन्न, तिनीहरूले कसरी लामो हेरिएको छन्, सत्र समय र अन्य तथ्याङ्क. यो जानकारी राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव मात्र व्यवस्थापन गर्न आंतरिक प्रयोग गरिन्छ.
हामी प्रकाशित नगर्नुहोस् वा जसरी हाम्रो तथ्याङ्क सार्वजनिक.
हामी सक्छन्, अवसर हाम्रो साइट दिइएको समय अवधि मा ह्यान्डल छ कति आगंतुकों वा हिट सूचीमा, तर व्यक्तिगत IP ठेगाना कुनै विशेष जानकारी जारी छ. यो क्षेत्रीय जनसांख्यिकी लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ र भण्डारण गरिएको छैन, न त साझा.
हामी कुनै हाम्रो डाटा बिक्री — यो केवल आंतरिक प्रयोग गरिन्छ.
कुकीहरू: हामी मात्र हाम्रो साइट को ई-वाणिज्य क्षेत्रमा कुकीहरू प्रयोग. कुकीहरू किनमेल गाडी सामग्रीहरू ट्रयाक र खरीद सत्र राख्न प्रयोग गरिन्छ. को कुकीहरू पनि पक्षबाट सहयोग भरण प्रयोग गरिन्छ स्वतः. को कुकीहरू कुनै पनि जानकारी पठाउन छैन र केही दिनमा समाप्त.
डेमोग्राफिक जानकारी र व्यक्तिगत सूचना हामी अनुरोध: हामी हाम्रो वेबसाइट को धेरै क्षेत्रमा व्यक्तिगत जानकारी अनुरोध; जब डेमोहरू डाउनलोड छन्, जानकारी अनुरोध गरिएको छ, उत्पादनहरु खरिद गर्दै, प्राविधिक सहयोग अनुरोध गरिएको छ वा हाम्रो समाचार सदस्यता अनुरोध गरिएको छ. व्यक्तिगत जानकारी सहित, हामी पनि आधारभूत डेमोग्राफिक जानकारी र / वा तपाईं भइरहेको समस्या को विवरण अनुरोध. सबै पत्राचार सूची अप्ट-मा हो र प्रयोगकर्ता तुरुन्तै हटाउन Unsubscribe@LC-Tech.com लागि ई-मेल पठाएर कुनै पनि बेला सदस्यता समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
कसरी हामी संकलित सूचना प्रयोग: कुनै पनि जानकारी हाम्रो वेबसाइट मा संकलित, को तथ्याङ्क सर्भर द्वारा प्रयोगकर्ता द्वारा पेश वा संकलित कि मा-घर जनसांख्यिकीय विश्लेषणका लागि कडाई प्रयोग गरिन्छ, उत्पादन सुधार र उन्नत प्रयोगकर्ता अनुभव. हामी एक मासिक समाचारपत्र ई-मेल द्वारा अप्ट-मा छ जो छ के. हामी स्प्याम वा थोक ई-मेल प्रस्ताव वा विज्ञापन गर्न न त हामी बेच्न वा कुनै पनि तेस्रो पक्ष व्यक्ति वा कम्पनीहरु हाम्रो सूची वितरण गर्न.
हामी सबै जानकारी कडाई गोप्य राख्न.
हामी सूचना साझेदारी गर्नुहोस् गर्ने: हाम्रो ग्राहकहरु बारेमा जानकारी कुनै पनि पहुँच भएका मात्र तेस्रो पक्षहरू आफ्नो E4 विश्व गेटवे क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण गेटवे मार्फत पहिलो डाटा निगम छ, PayPal संग, धारी र SanDisk® निगम. सूचना E4 विश्व गेटवे पठाइएको छ, PayPal वा धारी मात्र ग्राहक खरीद बनाउँछ र हामी सुरक्षित कारोबार गेटवे प्रयोग गर्दा. पहिलो डाटा निगम (E4 विश्व गेटवे अविभावक कम्पनी) संसारमा सबै भन्दा ठूलो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर को छ र संचालित 34 संसारभरि देशहरूमा. तपाईं आफ्नो जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. पहिलो डाटा verbally तिनीहरूले जानकारी साझेदारी नगर्नुहोस् र यो कार्ड जारीकर्ता नीति विरुद्ध छ भन्ने प्रमाणित भएको छ, जो तिनीहरूलाई कुनै पनि बिलिङ जानकारी साझेदारी गर्न अनुमति छैन. LC प्रौद्योगिकी E4 विश्व गेटवे वा पहिलो डाटा कुनै पनि नीति फिर्ता गर्न सक्दैन. सूचना देखि www.LC-Tech.com सीधा SanDisk® निगम पठाइएको छ एक ग्राहक SanDisk® RescuePRO® खरिद गरेको छ मात्र. SanDisk® निगम इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरु र डिजिटल उपकरणहरू को एक विस्तृत विविधता लागि सबै भन्दा ठूलो उत्पादकहरु र फ्लैश भण्डारण कार्ड उत्पादनहरु आपूर्तिकर्ता को छ. LC प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रिय SanDisk® निगम कुनै पनि नीति फिर्ता गर्न सक्दैन.
तपाईंको डाटा के अधिकार तपाईं:
यदि तपाईं दर्ता प्रयोगकर्ता छन् वा हाम्रो साइटमा बायाँ टिप्पणी छ भने तपाईं हामी तपाईंलाई बारेमा छ डाटा हेर्न वा डाउनलोड गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ. रूपमा LC-Tech.com टिप्पणी लिन गर्दैन, वा दर्ता प्रयोगकर्ता छन्, हामी डाउनलोड गर्न एक आगन्तुक लागि यो क्रमबद्ध को जानकारी छैन. हामी हुनेछ मात्र जानकारी सफ्टवेयर मूल्यांकन अनुरोध फारम भर्न देखि आपूर्ति जानकारी हुनेछ, एउटा समर्थन अनुरोध फारम, वा सम्पर्क फारम.
सामान्यतया फारम भर्न गरेको आगंतुकों लागि, डाटा आफ्नो इमेल ठेगाना हुनेछ, कुनै पनि IP ठेगाना फारम र ब्राउजर को प्रयोगकर्ता एजेन्ट स्ट्रिङ भर्न को समयमा तिनीहरूलाई नियुक्त तिनीहरूले प्रयोग. को आगंतुकों द्वारा प्रकाशित रूपमा डाटा बाँकी सार्वजनिक छ.
ग्राहकहरु तिर्नुपर्ने, यो पनि प्रोफाइल जानकारी र डाउनलोड समावेश गरिनेछ, भुक्तानी, र समर्थन टिकट इतिहासहरू.
*** तपाईं पनि "भूल गर्न" अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई बारेमा छ कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा पहिचान डाटा मेटाउने.
पाठ्यक्रम, यो समावेश डाटा हामी भने हामी कानुन आवश्यक छन् डाटा केही राख्ने प्रशासनिक वा सुरक्षा उद्देश्यका लागि आवश्यक वा.
तथापि, तपाईं हाम्रो एक तिर्ने ग्राहक छन् भने, र हामीलाई दर्ता भएको छ कि एक सफ्टवेयर लाइसेन्स छ, हामी हाम्रो डेटाबेस तपाईंले मेटाउन भने, एक प्राविधिक सहयोग मा तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन हामी हाम्रो डेटाबेस मा तपाईं हेर्न सक्नु हुनेछैन, लाइसेन्स नवीकरण, वा अन्य कुरा. त्यसैले, कृपया भनेर विचार तपाईं हाम्रो डेटाबेस देखि मेटाउने अनुरोध गर्दा.
वर्तमान समय अवधि लागि, यो युरोपेली संघ हाम्रो पर्यटकहरूलाई लागू, अनुसार सामान्य डाटा सुरक्षा नियमावली संग (GDPR).
यसबाहेक, जनवरी को रूपमा 1, 2020, यो पनि भर्खरै अधिनियमित लागू हुनेछ क्यालिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता ऐन.
हामी निकट भविष्यमा यो थप संशोधन हुनेछ.
पहुँच खोज्ने एक व्यक्ति, वा जो सच्याउन खोज्ने, संशोधन, वा गलत डाटा मेटाउन, आफ्नो / उनको प्रश्न निर्देशन गर्नुपर्छ support@lc-tech.com.
हामी एक उचित TIMEFRAME भित्र प्रतिक्रिया हुनेछ, not to exceed one week.
वर्तमान समय अवधि लागि, यो युरोपेली संघ हाम्रो पर्यटकहरूलाई लागू, अनुसार सामान्य डाटा सुरक्षा नियमावली संग (GDPR), र जनवरी को रूपमा 1, 2020, पनि क्यालिफोर्निया गर्न बासिन्दा पनि गर्न persuant क्यालिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता ऐन.
के डाटा उल्लंघन प्रक्रिया हामी मा स्थान:
कुनै पनि घटना जहाँ ग्राहक डेटा नष्ट गरिएको छ हुनुपर्ने, Stolen, वा संभावित सम्झौता, हाम्रो नीति कुनै पछि भन्दा इमेल मार्फत हाम्रो ग्राहकहरु सचेत छ 48 हाम्रो टोली घन्टा घटना थाह हुन्छ. हामी कुनै पनि आवश्यक डाटा सुरक्षा अख्तियार गर्न यस्तो घटना रिपोर्ट हुनेछ. हामी कुनै पनि ग्राहकहरु कुनै पनि अन्त-प्रयोगकर्ता सूचनाहरू अर्को चरणमा निर्धारण प्रभावित संग राम्ररी काम गर्नेछ, र भविष्यमा कुनै पनि यस्तै घटना कसरी जोगिन.
ग्राहक सेवा – Service@LC-Tech.com
सदस्यता रद्द – Unsubscribe@LC-Tech.com
फोन हाम्रो – टोल फ्री (866) 603-2195
FirstData संपर्क – यहाँ क्लिक गर्नुहोस्